Archive du 20200828
Toamasina Nakaton’ny Fanjakana ny Tiko sy AAA
Taorian'ny Magro AAA Behoririka dia nakaton'ny fanjakana omaly 27 aogositra ihany koa ny orinasa Tiko sy AAA ao Ambodioanambo Toamasina.
Governora Lylison Misy manangon-tsonia mitaky ny hanesorana azy
Olobe maromaro zanak’i Sofia no milaza ankehitriny fa diso fanantenana sy nanenina amin’ny governoran’ny Faritra Sofia, Lylison René de Rolland Urbain.
Rivo Rakotovao « Mila fanadihadiana ny raharaha Farafangana »
23, raha ny tambatr’isa farany hatreto no gadra nitsoaka ka maty voatifitra tao Farafangana nanomboka ny fivakisan’ny fonja ny 23 aogositra teo ka hatramin’ny omaly 27 aogositra.
Manampahefana nihoa-pefy tato ho ato Tsy voataiza firy tanatina antoko politika
Ny zava-misy teto amin’ny firenena tato ho ato dia mahatonga ny fitondram-panjakana ho lasibatrana fijery ratsy eo imason’ny vahoaka, hoy ny mpandinika raharaham-pirenena, Dany Rakotoson.
Commission Mixte Paritaire Voatendry ireo solontenan’ny Antenimeram-pirenena
Voatendry ireo solontenan’ny Antenimeram-pirenena ao anatin’ny Commission Mixte Paritaire (CMP), izay vaomiera hiara-hidinika amin’ny solontenan’ny Antenimierandoholona ny volavolan-dalana laharana 001/2020.
Hosoka amin’ny haban-tseranana Sarona ny afera goavana “Ecran Plat”
Fahitalavitra “écran plat” tao anaty kaontenera nanaovana fanambarana hosoka sy diso sarona ny alarobia 26 aogositra 2020 teo tao amin’ny seranantsambon’i Toamasina.
Raharaha FITRAMA Notorian’ i Jean Nirina i Jean Pierre
Notorian-dRafanomezantsoa Jean Nirina, tale jeneralin’ny orinasa Mpitsabo Malagasy FITRAMA, Rakotondranaivo Jean Pierre izay mpitsabo nentim-paharazana niara-niasa taminy teo aloha.
Asa fanaovan-gazety Notorian’ny OJM ny minisitra
Nitory ny Minisitry ny serasera any amin’ny Filankevi-panjakana ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny OJM noho ny fitsabahan’ny
Tsimialonjafy Mahamasina Zaza telo taona niharan’ny fanolanana
Nisy tranga fanolanana tetsy Tsimialonjafy Mahamasina omaly. Zazakely vao 3 taona no niharan’izany herisetra ara-nofo izany, ary bandy kely tsy mbola ampy taona no nahavita ny asa ratsy.
Minisitry ny fitsarana “Manaja ny zon’olombelona fanjakana”
Nisy ny fanararaotana ny fahavitsian’ny mpiambina izay 4 monja.
Akademia Miaramila Antsirabe Andiany maromaro nivoaka omaly
Tontosa omaly alakamisy 27 aogositra 2020 ny lanonana fanolorana ny mari-pahaizana ho an’ireo andiany nahavita fiofanana tao amin'ny Akademia Miaramila Antsirabe,
Taniketsan’ny baolina kitra Mampiroborobo izany koa ny FMF
Hatramin’ny tapaky ny volana martsa 2020 dia fantatra fa anisan’ireo Federasion’ny Baolina kitra maneran-tany manatanteraka ny tetika "Développement des talents –
Mahomby amin’ny inona moa ?
Ambara fa anisan’ny Filoham-pirenena 5 mahomby aty Afrika ny Filoham-pirenena Malagasy.
Antananarivo renivohitra Miisa 29.143 ireo mpiadina CEPE
Nanomboka omaly ary hitohy amin’ity anio ity ny fakana ireo taratasy fiantsoana ho an’ny mpanala fanadinam-panjakana CEPE ho an’ny CISCO Tana ville. Eny amin’ny toeram-pianaran’ireo mpianatra moa no akana izany.
Toekarena Tokony hirosoana ny drafim-panarenana
Soson-kevitra nomen` ny teo anivon` ny Antenimieram-pirenena ny tokony hirosoana sahady amin` ny drafim-panarenana ny toekarena izay efa nantsangana.
Serge Zafimahova “Vao mainka hampisy olana ny fampitrosana”
Ireo firenena any ivelany dia nanampy ny orinasa lehibe tao aminy. Mifanohitra amin'izay anefa no hita eto Madagasikara, raha ny fanehoan-kevitra nataon’Atoa Serge Zafimahova.
Heloka ara-toekarena Tsy mitovy hevitra amin’ny depiote ny PAC
Misy tsy mety ny tolo-dalàna lany teny amin’ny antenimieram-pirenena momba ny PAC (Pôle Anti-Corruption).
Itaosy Noratrain’ny mpanendaka ny tarehin’ilay vehivavy
Vehivavy iray no nendahina tovolahy iray mpanendaka teny amin’ny Cité des Assureurs Itaosy,
Tsiroanomandidy Naolana ilay tovovavy, nodorana ny tranony avy eo
Zazavavy kely mpianatry ny ny CEG ao Antaniditra, kaominina ambanivohitr’Ambatolampy , Distrikan’i Tsiroanomandidy no naolan'ny tovolahy iray izay zanaky ny andrimasom-pokonolona ao amin'io tanana io ihany raha ny fantatra.
Marolambo Tonga handevina vao hita fa vaky ny fasana
Nitrangana vaky fasana tao Marolambo. Tsy fantatra ny fotoana namakian’ny olon-dratsy ilay fasana fa raha tonga handevina ny fianakaviana
Soavimasoandro Novonoiny ny rafozany dia nalainy ny vola
Mpanampy an-trano tamina tokantrano iray teny Soavimasoandro ity tovolahy ity izay vao 20 taona monja. Rehefa nandeha ny fotoana dia lasa olon-tian’ity farany ny zanak’ilay mpampiasa azy ka lasa tompon-trano izy.
Garduc Madagascar “Lafo loatra ny rano fisotro madio ao Betafo”
Tsy mitsahatra ny miakatra andro aman’alina ny saran’ny rano fisotro madio ao amin’ny Kaominina Ambonivohitra Betafo Antsirabe amin’izao fotoana izao ka mikaikaika noho izany ny mpanjifa any an-toerana ary velon-taraina amin’ny tompon’andraikitry ny Garduc Madagascar
Malagasy avy any Eôrôpa Nisy 274 tafaverina an-tanindrazana omaly
Nigadona omaly teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ireo teratany Malagasy miisa 274, tavela tany Eôrôpa talohan’ny nikatonan’ny sisintanin’i Madagasikara noho ny valanaretina coronavirus.
Coronavirus 6 no maty tao anatin’ny 48 ora
Niampy 3 indray ireo lavon’ny covid-19, ka ny 01 teto Analamanga, 01 Vakinankaratra, ary 01 tany Diana, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta omaly.
Holafitry ny mpanao gazety Nanolotra arotava ho an’ny polisy
Sehatra roa samihafa saingy mifandray ny fitandroana ny filaminana sy ny asa fanaovan-gazety .